Gawaarida Cusub ee Magaalada Istanbul oo La Soo Bandhigay | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGawaarida cusub ee meteleysa magaalada Istanbul ee la Soo Bandhigay
30 / 10 / 2019 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metrobus, TURKEY
gawaarida cusub ee metrobus ee istanbul
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul ayaa soo bandhigaysa gaadiid cusub oo laga soo saari doono magaalada Bursa oo loogu talagalay nidaamka metrobus, kaas oo ka mid ah gaadiidleyda dadweynaha ee sida weyn looga isticmaalo magaalada. Magaalo-cusub oo hadda la tijaabiyay, ayaa sii wadi doonta soo-saarka haddii ay jecel yihiin muwaadiniintu.
Waxaa jira gaadiid dadweyne oo badan oo ku sugan Istanbul (metro, taraam, bannaanka iyo doonta). Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee qalabkan waa metrobus 'tuug'. Gawaarida loo yaqaan 'Metrobuses', oo ah mid ka mid ah gaadiidka cusub ee dadweynaha ee Istanbul, ayaa sida ugu badan oo ah 1 milyan oo reer Istanbul ah oo ay u safraan maalin walba. Si kastaba ha noqotee, awooddaani ayaa muddo dheer ka careysiisay dadka deggan Istanbul. Sidaas oo kale, Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay ku dhawaaqday inay biloowday mashruucyo cusub oo laxiriira nidaamyada Metrobus.
The metrobus, oo sidata 1 milyan oo reer Istanbul maalinkasta ah, waligeed kama dhicin ajandaha oo leh war ku saabsan jahwareerka meelaha joogsada. Gaar ahaan ka dib markii xoog la soo dersay saldhiga weyn ee Altunizade, Dawladda Hoose ee Magaalada Istambul ayaa ku dhawaaqday in mashruucyo cusub looga shaqeynayo sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinka ka jira nidaamka dhismayaasha magaalooyinka. Tiirka ugu muhiimsan ee mashaariicdaas waa gawaarida cusub ee metrobus. Haberturk Esra Bogazliyan, gawaarida cusub ee metrobus ee bilaabay wadista imtixaanka, xubin Guddiga Gaadiidka Gaadiidka IMM. Wuxuu weydiyay Suat Sarı
Khilaafaadka waa la xallin doonaa
Toddobaadyadii la soo dhaafay, gaar ahaan Altunizade, Zincirlikuyu iyo CevizliSawirada u eg aaladaha rakhiiska ah ee joogsiyada beerta canabka ah ayaa la muujiyey, iyo Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay ku dhawaaqday in mashruucyo cusub looga shaqeynayo sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinka ka jira nidaamka mitirka.
Tiirka ugu muhiimsan ee mashaariicdaas waa gawaarida cusub ee metrobus. Gaariga Akia oo ay soo saartey shirkad laga leeyahay dalka Iiraan ee Bursa ayaa bilaabay tijaabadiisa.
290 PASSENGER CASACEN IN LAGU SAMEEYO BURSA
Jaale, rakaabka haddii la amro gawaarida waxaa la siin doonaa waxsoosaarka Bursa, ayuu yidhi. Metrobuse-yada hada la isticmaalo waxay lahaan doonaan awooda xNUMX-160 rakaab… Dhismeyaasha cusub ee metroob waxay yeelan doonaan awooda rakaabka 165. Jaalaha, basaska labalaab ah marka loo eego awooda ayaa qaadan kara cufnaanta mitirka 290 sanadka, ayaa yiri: dizel xilligan la tijaabiyay naaftada gawaarida. Si kastaba ha noqotee, shirkaddu sidoo kale waxay soo saari kartaa koronto. Metrobus waa inay noqotaa koronto. Gaariga waa la tijaabinayaa. Ugu yaraan 3 waa in la isku dayo hal mar ..
Gobollada Hybrid Madeerka ee Jarmalka
Nidaamka Raadinta İzmir Gawaarida Dheeraadka ah Halkapınar…
HAVAIST oo Rakaab ka qaada Diyaaradda Cusub ee Istanbul…
Alstom, tareenka oo dhan in Eurasia Rail Turkey 2017 ...
Gawaarida Isticmaalayaasha Gawaarida Ganacsiga…
Gawaarida Cusub ee Magaalada Istanbul
Akia sumadda BRT
Khariidadda 'Metrobus Map'
Qalabka cusub ee Metrobus
Awooda rakaabka ee BRTs cusub
Nadiifinta Gacanka Kocaeli waxaa kormeera Hawada